Iindaba - uMvelisi
I-KingTai Inkampani iyimveliso ebanzi yokuthengisa edibanisa imveliso kunye nokuthengisa.Sinomzi mveliso kunye neqela lethu lokuthengisa phesheya, umzi-mveliso wethu ubekwe kwiHui Zhou City eGuangdong kwiPhondo.
Inkampani yethu iminyaka engaphezu kwama-20 yamava yezandla yesinyithi.
Ezifana: ibheji, ukuvula, iimedali, isitshixo, isikhumbuzi, i-lapel pin, ibhukumaka, njl njl kwaye sisebenza kunye negama elidumileyo, njenge: Harry potter, Disney, Wal-mart, Universal Studios njl.
Ukusukela oko yasekwayo, isiqinisekiso kunye nelungelo elilodwa lomenzi wechiza esithe salifumana lingaphezulu kweziqwenga ezingama-30, uninzi lwazo zii-SOS, iSedex kunye ne-ISO9001.
Sisoloko sibambelela kwimveliso ephezulu, imigangatho ekumgangatho ophezulu ukuyifuna ngokwabo, emva kokugqitywa kwenkqubo nganye, sineqela elikhethekileyo le-QC lokujonga ukuba ngaba iimveliso ziyahambelana na nenkqubo elandelayo, ukuqinisekisa inqanaba elifanelekileyo lemveliso.
Inkampani inesakhono esaneleyo semveliso kunye nokugcinwa kwayo, ngesiqhelo, xa iqela lethu leQC lihlola iimveliso, ziya kukhetha iimveliso ezingafanelekanga kwaye zivumele iimveliso ezifanelekileyo ukuba zingene kwinkqubo elandelayo. Emva koko iimveliso ezingagunyaziswanga ziya kubuyiselwa kwinkqubo yangaphambili yokucokisa, ngaxeshanye, sinendawo yokulawula ireyithi yokupasa yeemveliso ngexesha lokuhlolwa.Lokhu kusekwe ngokweemveliso ezahlukeneyo. Umzekelo, inqanaba lethu lokufumana ibheji ngama-95%. Xa imveliso engagunyaziswanga ingaphezulu kolu luhlu, siza kuyibuyisela imveliso engafanelekanga Nceda usazise ukuba izinga lokupasa elilindelweyo ngama-98%, ukuze sikwazi ukubonelela ngenqanaba lokuphumelela kwemveliso ngexesha lokuhlola.Sinendawo enkulu yokugcina kunye Indawo yokuxhasa iiodolo ezinkulu Nceda usazise xa ufuna ukuhambisa ngenxalenye. Indawo yethu yokugcina izinto iya kukhathalela ukugcinwa kweempahla.
Namhlanje nguKing Tai osebenza kunye nenkonzo yokuqala yomthengi kwaye uthathe inxaxheba kumboniso wecanton kunye nomboniso we-hong kong. Iminyaka emininzi. Sinikezela ngenkonzo enyanisekileyo kubathengi kwaye sigcina ukwenza izinto ezintsha ngobuso bendalo yobomi obumnandi.